Ciidanka NISA oo gacanta ku dhigay Mooto ay saaranyihiin Walxaha Qarxa – WARSOOR
Muqdisho – (warsoor) – Ciidanka Nabad Sugidda Qaranka ayaa degmada Afgooye ee Gobalka Shabeellaha Hoose ku qabtay Mooto ay saarnaayeen walxaha Qarxa. Sida ay SONNA u sheegeen saraakiil ka tirsan NISA.
Mootadaan oo ahayd nuuca loo yaqaano Dhugdhugleyda ayaa waxaa saarnaa walxaha Qarxa oo ay ka mid ahaayeen Jaakado ay Qaraxyo ku xidhan yihiin.
Saraakiisha NISA ayaa SONNA u sheegay in gacanta lagu haayo hadda Mootada iyo Ninkii waday, waxayna sidoo kale ay sheegeen inay baaritaano socdaan.
Faah-faahin intaasi ka badan ma aysan bixin saraakiisha hay’adda Nabad Sugidda Qaranka, hayeeshee wixii ku soo kordhaa arrintaan waxaan idin kugu soo gudbin doonaa si deg deg ah.